Isiteshi se-Ironing - iSearch
Qala yasendlini Imishini ayina esiteshini
Okthoba 29, 2017
Ukuze uthole isikhathi esihle nomsebenzi wokusiza, i ayina esiteshini, Umehluko ku insimbi evamile Ngakho-ke kucacile kakhulu. Umama wesifazane nomninindlu bayazi ukuthi kubaluleke kangakanani izingubo ezinamathele empilweni yobuchwepheshe kanye nesikhathi samahhala. Izindwangu zensimbi ezinamehlo zimelela ukubonakala kahle. Kodwa-ke, ngaphambi kokunquma ngesibonelo, kuhle ukuba uthole umbono ongcono wolwazi lwethu iziteshi ayina ukwenza.
1 Iyini isiteshi sesitimela?
2 Ukusebenza kuchazwa kalula
3 Izinzuzo ezikholisayo zesiteshi sesineke
5 Cabanga ngesinqumo sokuthenga
5.1 Khetha okwenziwe imvelo
5.2 Hlela izidingo zesikhala
5.3 Abakhiqizi abaqanjwe kabusha
7 Thenga ku-intanethi noma kumthengisi?
7.1 Ukuthenga kumthengisi
7.2 Kulula ukuthenga ku-intanethi
8 Ukusingatha okuphephile kwesishusha esishisayo
10 Ingabe udinga ibhodi elihle lokudonsa?
11 Ubani ozuzwa esiteshini se-ironing?
13 Gcina ukugcinwa okufanele
14 Okunye: insimbi yensimbi
Iyini isiteshi sesitimela?
Kusuka kokubili ayina esiteshini kukhulunywa lapho insimbi nokunye okunye base station ingatholakala. Ngakho-ke ukuthi i-steam ikhiqizwa njalo, iqinisekisa a ibhuyili elihlanganisiwe esiteshini sesisekelo salesi simangalo. Ngokungafani nezinye izintambo, amanzi ashisayo akhiqizwa ebhokisini adluliselwa nge-hose. Lokhu kuyodwa ayina esiteshini insimbi evela isisindo sokukhanya futhi amalunga omzimba, Ngakho i-ironing yinto engathí sina kakhulu kuwe. Ukuvuselela njalo ukufakwa kwe-ironing nakho kuphelile. Ngenani elikhulu le-ironing, uzobona ngokushesha izinzuzo eziningi zesiteshi se-ironing, futhi ngeke ufune ukuphuthelwa ngemva kokusebenzisa kokuqala.
Umkhiqizi owaziwayo Intuthu ezinsimbini sebenze njalo ekuthuthukiseni nasezintweni ezintsha, ngaleyo ndlela izinzuzo zicaca nakakhulu. Ubuchwepheshe bulokhu bukhuphuka lapha futhi buvumela izinsimbi zangaphambili ukuthatha isihlalo sempuphu.
Uma ukuthenga kuhilela izindleko eziphezulu ekuqaleni, maduzane bazokhokhela wena. Ugcina amandla nesikhathi, ukufaka izinsimbi ngensimbi encane kakhulu kakhulu.
Ukusebenza kuchazwa kalula
Sense yilapho i-ironing eyodwa umphumela ophezulu we-smoothing ukufeza. Ngenxa yobuchwepheshe obuhle kakhulu, lokhu kuyenzeka ngesikhungo esinezinsimbi. I-steam eshicilelwe (mayelana ne-4,5 - 6 ibha) iholwa ngamabhuzi wesimo se-steam. Lezi zihanjiswa kwi-soleplate yensimbi. I-steam isakazeka kulezi zindwangu, ngesikhathi esifanayo zomiswe ukushisa okukhulu kwensimbi. Kule nqubo kungase kube ngokubhebhethekisa kakhulu imiphumela emangalisayo sifinyelele.
Izinzuzo ezikholisayo zesiteshi sesineke
Ukubamba izinsimbi kungathatha isikhathi esiningi namandla, ikakhulukazi uma ayina lemali njalo kuningi ukuhlukanisa. Ngesiteshi esinezinsimbi usindisa lokhu futhi kungenzeka isikhathi esengeziwe samahhala bajabule. Lezi zithombe zikhululekile futhi zi-ergonomic ezandleni. Noma yikuphi izingubo, ngisho noma eziqinile noma ezinzima, zizoba bushelelezi ngaphandle komzamo omkhulu - futhi uma kunesidingo kuphela freshened up, Ngezimpawu ezivamile umusi awufaki kahle izindwangu ngoba awunayo ingcindezi enkulu. Njengoba akuzona zonke izintambo ezibekezelela ukushisa okufanayo, lokhu kungalawulwa kalula esiteshini se-ironing. Kubalulekile izindwangu ezinomsoco ezinjengelikalika, i-polyester ne-velvet. Inzuzo ebalulekile futhi ukugcwaliswa okulula ngamanzi.
Ngokuyinhloko, umphumela we-ironing walezi zithombe uqinisekile. Imiphumela ycono kakhulu futhi lokho isisindo sokukhanya yensimbi iqinisekisa ngokushesha. Ngakho-ke, ngisho nangemva kokufaka intaba enkulu yokuhlanza izingubo, akudingeki ukuba ukhononde ngokushesha ngokubuhlungu nokukhathala.
Uzuza ngokuphawulekayo umahluko phakathi kwesiteshi esinezinsimbi kanye nensimbi evamile. Ngenxa yokucindezela okukhulu ungabhebhezela ngisho nezingxube eziningana zezindwangu ngesikhathi esifanayo. Ukucindezela okuphumelelayo kudalwe ebhokisini lamanzi.
Cabanga ngesinqumo sokuthenga
Ungazithengi isiwula ayina esiteshini, Isinqumo sokungalungi sokuthenga singakuphazamisa njalo futhi sibangele inkathazo ngesikhathi sokusebenzisa. Ngokuqinisekile ulindele isikhathi eside, kodwa futhi inani elihle lemali, Ngokuqinisekile isimangalo kufanele sibe sesinye ayina esiteshini kufanelekile enkonzweni okufanele inikezwe. Uma nje ubeka ingubo eyodwa noma ezimbili njalo njalo, isimangalo sakho ngeke sibe phezulu. Nokho, insimbi eningi futhi kaningi, kufanele uthole eyodwa ngokufanele imodeli enamandla ukukhetha. I-Decisive futhi yilokho ngempela ofuna ukuyifaka. Izindwangu ezigqoke kakhulu zidinga izinga eliphakeme lokusebenza ngokushelela esiteshini, ngokumelene nezindwangu ezingathandeki. Ukuze ama-coarse abe abushelelezi ngamanzi, umfutho ophezulu kufanele ube khona. Yileyo ndlela kuphela ongayenza ngayo ngemuva kokufaka ironing izindwangu ezibushelelezi bajabule.
Khetha okwenziwe imvelo
Ku-assortment ejulile ye Intuthu ezinsimbini thola okunye noma okunye okuthakazelisayo. Ngakho-ke onobuhle nabo Amandla noma imisebenzi yokugcina i-eco ukutholakala, njengesibonelo ku Isiteshi se-Tefal GV5245 esinesitoreji esise-Easycord Pressing. Lokhu kungagcina cishe ingxenye yesihlanu yamandla, okungabandakanya ngokwemvelo ngokusebenzisa kahle kakhulu. Ukutshalwa kwezimali okunjalo ayina esiteshini ngokuqinisekile kufanelekile ngenxa yemvelo.
Hlela izidingo zesikhala
Ungakhohlwa ukuhlanza ngaphambi kokuthenga. Akusikho njalo i-ironed, ngakho-ke imodeli oyifunayo idinga indawo lapho ingagcinwa khona. Ubukhulu buhlukile kakhulu, kodwa kufanele buqatshelwe ngaphambi kokuthenga. Ungakhohlwa isisindo sesiteshi! Phakathi naleso sikhathi, abakhiqizi banikeza amamodeli angadingi isikhala esiningi sokugcina.
Abakhiqizi abaqanjwe kabusha
Cishe wonke umakhi owaziwayo wemishini yasendlini nayo iziteshi ayina ohlelweni lwakhe. EJalimane, i-AEG, i-Siemens, i-Tefal, i-Rowenta ne-Philips ziphakathi kwabakhiqizi abaziwayo. Lapha, umthengi unethuba elihle lokukhetha imikhiqizo ngokuqondile nezidingo zakhe. Yile ndlela esebenza ngayo ithangi lamanzi amakhulu Isibonelo, kunomthelela uma kunamanani amakhulu okudonsa. Ukuvama kokugcwaliswa okudingekayo kwamathangi amanzi kunciphisa futhi kusindisa isikhathi. Ezinye izici zingatholakala endaweni ehlukile noma isimo se-iron noma i-soleplate. Ngakho amadivaysi ahlukile afanele izidingo ezikhethekile, isibonelo sokufaka ama-shirts.
Ngakho-ke akudingeki ukuba wehla njalo kudingeke ukusetshenziswa amanzi distilled. Futhi kusetshenziswe ukusetshenziswa kwamanzi ahlungiwe kusuka emgqeni.
Okokuqala, isinqumo sokuthenga okuthile ayina esiteshini Sicela, zibuze ukuthi ungathenga yini imodeli yakho yephupho. Unenketho phakathi kokuthenga kumthengisi, kodwa futhi i-intanethi inikeza ithuba lokuthenga. Esikhathini esedlule, umthengisi wendawo wayekuphela kokukhetha Online ukuthenga ngokugxila kakhulu. Akusizathu esingenasisekelo, ngoba izingxabano zikhuluma ngokuqinile ukuthengwa kwi-Intanethi.
Izinzuzo zokuthenga kumthengisi wendawo zichazwa masinyane. Ungabheka imodeli ngokuqondile bese uyithatha ngokushesha emva kokuthenga. Ngeshwa ngokuvamile awutholi ukukhethwa okukhulu kweziteshi ezahlukene kumthengisi. Ngokufanayo, nansi izintengo ezikhangayo kakhulu ezincane kakhulu kunokungavamile. Abathengisi abaningi behla amabhakede ambalwa ngentengo, kodwa ngokulondoloza okukhulu awukwazi ukulindela okuningi lapha. Ngesinye isikhathi abathengisi bazama ukugqugquzela amamodeli asekhona njengenhle kakhulu. I-Negative nayo iyindlela, indawo yokupaka, izindleko zokuhamba kanye nezikhathi zokuvula ezihleliwe lapho uthenga umthengisi ukuthi aqaphele. Ababonisi abanamakhono abahlale bekhona akutholakele. Uma kunjalo, ngokuvamile kufanele ulinde ngesineke kuze kube yilapho umuntu enesikhathi sakho. Ifomu lemigqa ende, nokubekezela kuhlolwa. Abantu abasebenzayo banqunyelwe ngokuhamba kwesikhathi ngamahora okuvula. Isikhathi samahhala esibalulekile silahlekile.
Kulula ukuthenga ku-intanethi
real ukuhlabana Ngakolunye uhlangothi, uzothola iningi labo nabathengisi Online, Lapha kungatholakala ekusesheni izinhlinzeko ezikhangayo ngempela. iziteshi ayina Ungayithola lapha ngokukhethwa okukhulu kakhulu futhi unenkululeko yokuzikhethela. Yebo wamukelekile kakhulu kwi-intanethi izincazelo ezinhle zomkhiqizo iyatholakala. Kuhle futhi ukuthenga ngehora nsuku zonke ukuze amahora okuvula angeke akubeke ngaphansi kwengcindezi yesikhathi. Ugwema izimo ezingathandeki lapho uthenga umdayisi wangakini. Ochwepheshe bazisa leli qiniso. Ukuthengwa kwe-intanethi kushibhile futhi kuhambisana nokulondoloza isikhathi esiningi. Ukubuyekezwa kwamakhasimende kukwazisa kakhulu kuwe ngenhloso. Lezi zibuyekezo zinikela ngolwazi ngendlela ukusebenza nokusebenza ngayo amamodeli asetshenziswa nsuku zonke. E-intanethi, uzothola izeluleko ezifanele ezivela kubahlinzeki abaningi, ngefoni noma ngisho nasezingxoxweni. Nge-imeyili le mibuzo ingacaciswa kahle kakhulu.
Ukusingatha okuphephile kwesishusha esishisayo
Ngenxa yokwazi komkhiqizi iziteshi ayina Ungabeki izingozi endlini, uma nje uhambisana nenqubo yokuziphatha yomkhiqizi. Ngokumelene nokushisa kwamaconsi amanzi awela, kuqinisekisa, isibonelo, kwamanye amadivaysi i ukuvuza stop, Ngu umusi isiqondiso gcina ukulawula njengomsebenzisi. Isikhathi eside ukugcwalisa amanzi akuseyona ingozi, njengoba ukuvuleka kokugcwalisa kunesayizi esimnandi. Ideal ubuye kubizwa okuthiwa ukuvala shaqa okuzenzakalelayookwazi ukuziveza ngokusheshisa uma kungasetshenziswa. Kuhlale kubalulekile ukuhlinzeka ngesiteshi se-ironing ngokuma okuphephile nokuzenzekelayo. Ungazami lapha, uma kunesidingo ibhodi lokudonsa elifanayo ithengwe.
Ngokuyinhloko, uma u-ironing, njalo unake izingane nezilwane ezifuywayo. Eqinisweni, isandla somntwana omncane singasheshe sihambe sisondelene nensimbi ngenxa yelukuluku. Amakati nezinja abazi ukuthi kuyingozi kangakanani ukushisa kwabo. Sicela ube kancane ngokuqapha lapha!
Ingabe udinga ibhodi elihle lokudonsa?
Ngakho uthola ngempela imiphumela yakho ayina esiteshini Kunoma yikuphi, ibhodi elimele ukudonsa liyadingeka. Kufanele ukhokhele kakhulu ukuzinza ngoba lokhu kuyisici sokuphepha sokunakekelwa okungenabungozi. Amapulangwe amasha ajwayelekile anamandla adingekayo, kodwa ayidlale ephephile. Yiqiniso, akuwona umthwalo wokuthenga ibhodi le-ironing lapho uthenga isiteshi. Kodwa-ke, uma unenkinga, kufanele ukhethe ibhodi entsha yokudonsa. zabo ayina esiteshini kumele kube nesikhala esanele ebhodini lokubamba izinsimbi ukuze lime ngokuphepha nangokuqinile. Khumbula ukuthi isikhathi esiningi isisindo esiwusizo sikhulu kunensimbi evamile. Ngokuyinhloko, ithangi lamanzi yisici esiyinhloko esinquma isisindo. Uma amanzi amaningi ekhona, kuthola kanzima. Akuyona yonke ibhodi yezinsimbi ezithengiswayo ezingakwazi ukubhekana nomthwalo onjalo. Uma ibhodi lakho lokudonsa lihlehlile futhi liwe, le ngozi ingabangela ukulimala nokulimala. Ngakho-ke, sicela ungavumeli ukuzinza kwebhodi lakho lokubamba iqhwa libe ngemuva!
Ubani ozuzwa esiteshini se-ironing?
Umsebenzi we-ironing uthatha isikhathi esiningi ukuze uthole izinsimbi ezinkulu. Uma kusekhona izingubo ezinzima-zensimbi ebhasikisini lokuhlanza, ukufakwa kwensimbi kuvame ukuhlehliswa. Ngokuhamba kwesikhathi lokhu kuzoholela enhlobonhlobo enkulu yezintaba. Uma ungomunye walabo bantu abangakwazi ukwamukela umcibisholo owodwa, ukufaka ironing kuba isenzo esinamandla. a ayina esiteshini ngokuqinisekile kuyoba ikhambi kuwe. Kungasindisa isikhathi esiningi, ngoba lesi simangaliso sokudonsa simelela ukugcina isikhathi nokusebenza kahle. Ngemuva kokudonsa kulula ukubona ukuthi yimiphi imiphumela emihle lezi zindlela zokugcoba. Ngisho nezindwangu ezinzima-zensimbi zibushelelezi futhi zingabimbi kahle nalezi zimangaliso zobuchwepheshe. Futhi kuya ukuxubha up Izembatho ezembethe kakade zingabika ngalawa madivayisi kuphela okuhle. Izinto zokwakha eziningi, izindwangu ezinhle futhi ezibucayi nazo ziyazuza emanzini amanzi namanzi ashisayo. Okusebenzayo yi Ukuguquguquka kwezicubu ezahlukene, Isibonelo, uma ufuna ukufaka i-blouse isilikhi noma ukulala ebusuku kwe-polyester, vele unciphise ukushisa nomoya. Izinto ezinamandla ezifana nelineni nekotini, ngakolunye uhlangothi, zingakwazi ukuphatha amandla amaningi Dampfbügelstation.
a ayina esiteshini ngenxa yezicelo ezilandelayo:
Ukufunwa okuqhubekayo kokugqoka okungenamikhono nezinye izingubo zokugqoka.
Isifiso sokulondolozwa kwesikhashana kanye nesikhathi esengeziwe samahhala.
Isimangalo sikwazi ukusindisa amandla ngenkathi i-ironing.
Ngokuyinhloko, ingubo engenamibimbi kubantu abakhangayo nabalungile, kungakhathaliseki ukuthi ubulili, iminyaka noma umsebenzi. Izindwangu ezincibilikile zinikeza umbono wokunganakwa, okwenza isithombe esingalungile hhayi kuphela empilweni yokusebenza yansuku zonke. Ekuphileni okubuchwepheshe, abantu abaningi basesidlangalaleni, babe noxhumana nabo bamakhasimende futhi babamele inkampani, njalonjalo izingubo ezigcinwe kahle kumele zigcinwe.
Gcina ukugcinwa okufanele
Njengomunye ayina esiteshini ayinakho izingxenye zemishini, umzamo wokondliwa njalo uphansi. Yiqiniso, ikhwalithi yedivayisi idlala indima enkulu. Imishini emihle ingenza iminyaka ngaphandle kokugcinwa okubalulekile. Kodwa njengoba cishe cishe wonke amadivaysi ahlangana namanzi, nasi iphuzu elibuthakathaka. Amanzi okupompi angase ahluke kakhulu kwesifundazwe. Ikakhulukazi izindinganiso zobunzima bamanzi zihluka kakhulu. Isizathu salokhu ikakhulukazi i-lime equkethwe emanzini okuphuza. I-Lime inendawo yokulungisa. Ngakho-ke izinkathazo ezinenkani zingavela, okuyinto i ayina esiteshini ngokushesha noma kamuva kuphazamise umsebenzi wabo. Ama-buzz noma ama-hoses angakwazi ukuvalelwa yi-deposit, okuholela ekusebenzeni okunciphise noma ukuhluleka ngokuphelele.
Ukunquma amapheshana okuhlolwa kanzima okutholakala kwamanzi atholakalayo, yiziphi abakhiqizi okungenani ayina esiteshini buyela. Zibuye zitholakale ngokwahlukana futhi zinconywa ezindaweni lapho ubuchopho bamanzi bungaziwa noma buhluka kakhulu. Ngokuyinhloko, kukhona nolwazi oluningi mayelana nemfanelo yamanzi yomhlinzeki wamanzi okuphuza. Lokhu kungase kusekelwe ku amanzi ubulukhuni usuvele uqaphela ukuthi ukhona descaling kufanele kwenziwe isikhathi eside noma esifushane. Abanye abakhiqizi banikeza ngokuqondile ngqo ama-agent noma izithasiselo ezithile ukuvimbela ukubalwa. Okunye kuzoba ukusebenzisa amanzi ase-distilled, okuyinto abanye abakhiqizi abakhombisa. Ngisho nemindeni, enamanzi ayo okuphuza endlini ifakwe ohlelweni lwe-decalcification ukunqoba, kuyacaca ukuthi kunenzuzo lapha.
Ngemuva kokusebenzisa i ayina esiteshini Lokhu kufanele kuhlanjululwe okwesikhashana, ngokufanele ngamanzi acwecwe. Akufanele kube khona amanzi ku-tank noma ipayipi, ngoba uma amanzi ekhuphuka, i-lime noma enye idiphozi ihlala. Ngokufanayo, amabhaktheriya angakha ngokushesha emanzini aphelile. Uma kudingeka ukuhlaselwa, landela imiyalelo yomkhiqizi, ngaphandle kwalokho iwaranti ingavimba. Lapho uhlanza okudingekayo ayina esiteshini unqanyuliwe emanzini futhi ucolile ngokwanele. Abanye abakhiqizi banikeza amadivayisi wabo nge Kalkablass isikulufa, okwenza kube lula ukuhlaselwa. Emiyalweni yokusebenza, umkhiqizi uvame ukuhlinzeka ngama-agent agciniwe noma enze izincomo. Okuhle yiyona umsebenzi we-Calc-Clean njengoba ku I-Philips GC7715 / 80 FastCare Isitoreji Sokushisa
Ngaphandle kwalokho, itholakala ezitolo i-agent yokwehla yonke indawo iyatholakala. Ngesikhathi sesondlo, ukunakekelwa kumele kukhokhwe kwintambo yamandla. Ikakhulukazi neziphambeko zamadivayisi amadala zingenzeka ngokuhamba kwesikhathi. Ikhebula ne-connector akumele kubonakaliswe.
UPhilips GC7715 / 80 i-ironam generator iron, insimbi engenacala, amalitha angu-2.2, inkomba emnyama
I-XXL XLUMX litre amanzi amanzi
I-2.400 Watt max. Ukusebenza, kuze kufike ekucindezelweni kwe-bar ye-5,5, i-voltage: 220 kuya ku-240 V
Ukukhishwa kwesiphumu okuqhubekayo okufika ku-120g / min, ukuthuthukiswa kwamandla kagesi okufika ku-250 g / iminithi
Silence umsebenzi we-ironing othulile
I-SteamGlide yesikhumba se-ceramic iqinisekisa ukunambitheka okukhulu kombhakabhaka
Okunye: insimbi yensimbi
Ngokuyinhloko, insimbi yensimbi incane kakhulu kunesiteshi esinezinsimbi. Akudingi isikhala esiningi sokugcina futhi sithengwa kakhulu eshibhile. Kodwa-ke, njengoba ihlanganisile i-tank yamanzi, ubona ngokushesha isisindo esiphakeme lapho u-ironing. Esikhathini esiteshini se-ironing, noma kunjalo, ithangi lamanzi aliyona ngqo ensimbi, ngakho-ke ungalindela isisindo esincane. Labo abasebenzela isikhathi eside bayothola ukuthi ukukhululeka kwezigqoko zabo. Ngokuba isiteshi sesitimela se-steam sichaza ukucindezela okukhulu, ngoba lokhu kukhwelisa imicu ngaphandle komzamo. Ngokuyinhloko, insimbi yensimbi ayiyona into efana nesiteshi esinezinsimbi.
Isihloko sangaphambilinimetal detector